Bipụtara: August 31, 2021
Emelitere: Febụwarị 11, 2022
Tebụl ọrụ bụ ebe nzukọ IT na -arụ ọrụ, ogo ọrụ ya na -ekpebi echiche nke ịbụ akụkụ bara uru nke nzukọ a.
Ntugharị na-aga n'ihu nke azụmahịa iji nweta igwe ojii amanyela ndị otu IT imezigharị desktọpụ ọrụ ha, nke gụnyere ndị na-ere ahịa na-anakwere ikike igwe ojii na automation smart nke AI kwadoro.
Ntughari a na -agba mbọ hụ na usoro azụmaahịa anaghị arụ ọrụ na silos ọkachasị mgbe a na -enye ọrụ karịrị ọtụtụ ngalaba.
Ijikọ tebụl ọrụ yana sistemụ njikwa ngwụcha bụ otu n'ime ọtụtụ usoro iji mebie ọrụ siled. Ngwakọta dị otu a ga -akpali KPI nke na -atụ afọ ojuju onye ọrụ, oge iji dozie tiketi, olu oku, wdg.
N'ime blọgụ a, anyị ga -achịkọta uru anọ dị na ijikọ tebụl ọrụ yana sistemụ njikwa njedebe.
Ịbawanye arụmọrụ nke ndị ọrụ
Tebụl agbakwunyere agbakwunyere na -ejikọ data nke onye ọrụ na ngwaọrụ ọ na -eji, nke na -akwalite arụmọrụ nke onye na -ahụ maka nyocha nsogbu onye ọrụ kọrọ.
Tiketi na -abata ga -enwe ozi niile gbasara ngwaọrụ; dịka ọmụmaatụ, tiketi ihe mere maka laptọọpụ nwere nsogbu ịgba bọọlụ ga -enwe ụdị BIOS akpọrọ na tiketi ahụ. Site na ozi ahụ, onye na -ahụ maka teknụzụ nwere ike ịlele ma BIOS bụ nke kachasị ọhụrụ ma ọ bụ nke ochie.
Ụdị visibiliti a na -akwụsị mkpa ọ dị onye na -ahụ maka teknụzụ ịjụ ozi n'aka onye na -arịọ arịrịọ.
Uru ọzọ bụ na ọ nwere ike belata ọnụ ọgụgụ mmụba achọrọ ebe ọ bụ na ozi dị mkpa dị maka ndị na -ahụ maka teknụzụ 1.
Nlekọta ngwụcha ka mma
N'ime tebụl agbakwunyere agbakwunyere, onye na -ahụ maka ngwanrọ na -aga n'ihu na igwe ndị ahịa, na -enyocha paramita ndị dị mkpa yana na -ewepụta ọkwa mgbe ihe na -efu ma ọ bụ na -emezighị emezi. Nke a na -enye ndị ọrụ nka aka ịgbaso mgbanwe ma nyochaa njehie dị oke mkpa na netwọkụ ha.
Nnyocha nlegharị anya na -eme ka otu nzukọ na -enwe ike iguzogide oge ezumike. Ebe ọ bụ na ndị na -ahụ maka ọrụ nwere ike ijikwa nsogbu tupu ha enwee ike metụta nzukọ a. Obere oge ezumike pụtara obere mfu na arụpụtaghị ihe.
Eserese kacha mma nke akara ngosi na ihe kpatara ya
Nsogbu ụfọdụ abụghị nsogbu kama ọ bụ akara nke nsogbu. Mgbe ị na -agba okpokoro ọrụ n'ụzọ dị larịị, ihe mgbaàmà nwere ike ịdị ka nsogbu ebe ọ bụ na enweghị ozi.
N'ime tebụl agbakwunyere agbakwunyere, ndị na -ahụ maka nka nwere ike ịchọpụta ihe mgbaàmà wee chọpụta ha nyocha nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, tiketi maka onye ọrụ na-enweghị ike ijikọ na Wi-Fi nwere ike ile anya kwụ ọtọ, mana nsogbu nwere ike ịbụ adreesị MAC nke laptọọpụ onye ọrụ nwere ike ọgaghị adị na ngwaọrụ rawụta. Ndị na-ahụ maka ọrụ nwere ike lelee nke a site na ị nweta adreesị MAC na tiketi, n'okpuru ngalaba ngwaọrụ metụtara ya, gbakwunye ya na router, wee gwa onye ọrụ ka ọ malitegharịa ihe nkwụnye Wi-Fi ya.
Nkwado Remote ka mma maka ndị ọrụ ngwụcha
N'ime tebụl agbakwunyere agbakwunyere, onye ọrụ dịpụrụ adịpụ na -eche nsogbu na ngwaọrụ ya nwere ike iwepụta tiketi, onye na -ahụ maka teknụzụ nwere ike nweta nhazi nke sistemụ ngwa ngwa. Ọkachamara ahụ nwere nhọrọ ị nweta ngwaọrụ na -anya ma ọ ga -ebido patch na mmelite ngwanrọ iji dozie nsogbu ahụ.
Ikike ijikwa adịghị ike ọ bụla dị anya na -akwalite nchekwa nke akụrụngwa IT nke otu nzukọ. Nke a na -etinye ntụkwasị obi n'uche ndị isi IT ka ha gaa n'ihu na -erite uru nke ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Jiri Motadata ServiceOps nweta njikwa ọrụ nke ọma
Motadata ServiceOps bụ ihe jikọrọ ọnụ na-ejikọ ike nke ITIL na-ejikọ ọrụ IT yana njikwa njedebe akpaaka iji nyefee ahụmịhe onye ọrụ kacha mma yana uru azụmaahịa ka mma.
Ezubere ihe ngwọta anyị maka arụmọrụ nke na-ebelata ọnụ ahịa, yana ndozi nke nnabata site na iji njikwa SLA wuru n'ime ya.
Ị nwere ike nweta uru ndị a kpọtụrụ aha n'elu site na ngwakọta agbakwunyere anyị nke gụnyere ọnụ ụzọ ọrụ onwe, isi ihe ọmụma, arụ ọrụ enweghị koodu, yana ọdụ data CI iji chekwaa ozi niile bara uru.
Ị nwere ike ịnwale ServiceOps na -akwụghị ụgwọ maka ụbọchị 30 wee hụ n'onwe gị ka ọ ga -esi gbanwee usoro nnyefe ọrụ gị.